Imibuzo Evame Ukubuzwa | Inhliziyo Galaxy Amasiko (Beijing) Co., Ltd
Kungani utshala imali kumafilimu aseChina futhi yiziphi izinzuzo kubatshali bezimali bangaphandle?
Onke amafilimu asohlwini lwethu lwewebhu akhishwa ikakhulukazi ezweni lase China.Ngokuba amafilimu ethu athandwayo nawo akhethiwe ngokuya ngezimo zemakethe yase China, ngokuhambisana nemakethe yamafilimu yasekhaya, ihhovisi leposi kanye nokunambitheka komphakathi kwasekhaya.
Imakethe yamaShayina yamafilimu isesikhathini sokuthuthuka okusheshayo.
Izizathu ezine zenza ihhovisi lebhokisi lamafilimu laseChina likhule kakhulu minyaka yonke.
(1) Inani elikhulu labantu baseChina.
(2) Ukwanda okusheshayo emholweni wabantu ojwayelekile kwenza kube lula kakhulu ukubona ibhayisikobho kumabhayisikobho njengesidlo sasemini.
(3) Umbuso uyayisekela inqubomgomo embonini yamafilimu ngamandla.
(4) Ngaphansi kwesimo esibi se-COVID-19 yomhlaba, imakethe yaseChina ihlukile futhi ibiselulekela emakethe yangaphambili.Ihhovisi lebhokisi lefilimu likhula ngokuqinile.
Bona idatha ye-belows, singabona igumbi elikhulu lokuthuthuka le-china box box office.
(Ziba u-2020 ngenxa ye-COVID-19, kepha kulo nyaka imakethe ibuyisiwe)
Thatha i-movie ekhishwe njengesibonelo, uma ngitshala i-100,000 YUAN, ngingathola inzuzo engakanani ekugcineni?
Ngokuvamile, ehhovisi lebhokisi lebhayisikobho, sekusele ama-35% kuya kuma-39% womkhiqizi, ngaphandle kwesabelo secinema nezinye izimali, abatshalizimali bangathola imali engenayo ehambisanayo ngokwesilinganiso sokutshala imali.
Isibonelo, HI, Mama, i-movie ekhishwe ngoFebhuwari 12, kulo nyaka weSpring Festival. Izindleko zokukhiqiza ziyizigidi ezingama-200, ibhokisi lokugcina lebhokisi lingama-5.41 billion, uma utshala i-100,000 RMB lapho ungathola khona i-947,100 okungenani ekugcineni.
Ibhayisikobho Sawubona Mama
Imali yokutshala imali (RMB) Imali engenayo (RMB)
Ngazi kanjani izinombolo zokugcina zehhovisi lamabhokisi futhi izinombolo ngizithathaphi?
Kukhona enye yezinhlelo zokusebenza ezigunyazwa kakhulu zesikhathi sangempela sedatha ye-movie box office, ebizwa ngeManYan Movie, www.maoyan.com, nayo ingalanda uhlelo lokusebenza kuselula. Ngemuva kwalokho ungabona ihhovisi lebhokisi lesikhathi sangempela lawo wonke ama-movie.